Toliara : namboarin’ny UE ny kianja Tsimanetse | NewsMada
Toliara : namboarin’ny UE ny kianja Tsimanetse
Nohavaozina tanteraka ny toeram-pilalaovana fanatanjahantena any Toliara. Enim-bolana nanaovana ny kianja, novatsin’ny Vondrona eoropeanina (UE) vola, amin’ny alalan’ny tetikasa Dinika, ary nankinina amin’ny ONG Bel Avenir. Kianja natokana ho an’ny taranja basket sy volley, miampy efitrano fidiovana ahitana efitra manokana ho an’ny sembana. Faritra maitso malalaka nohajarina manampy ireo, ho fanajana ny tontolo iainana. Karazan-javamaniry maherin’ny 100, tsy fahita raha tsy any amin’ny faritra atsimo, nampaniriana amin’izany toerana izany.
Kianja misokatra ho an’ny fikambanana mampiasa azy (Association des Usagers du Terrain de sport de Tsimenatse – AUTT). Sekolim-panjakana sivy anisan’ny mampiasa izany, fanaovan’ny mpianatra fanazaran-tena amin’ny taranja fanatanjahantena ataony. Eo koa ny fifaninanana any anivon’ny sekoly sy ataon’ireo ekipa samihafa isaky ny faran’ny herinandro. Kianja mahazaka fifaninanana eo amin’ny sehatra nasionaly. Alefa mialoha any amin’ny komity mpitantana ny kianja izay fangatahana rehetra ho fampiasana azy. Komity ahitana solontenan’ny fari-piadidian’ny fampianarana, ivontoeram-pirenena momba ny fanofanana arakasa sy ny ONG Bel Avenir.
Izao asa izao tanteraka, vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny Ivontoerana fanofanana arakasa. Mahita masoandro indray ny tohana iray ho an’ny tanoran’i Toliara, efa nisy tany amin’ny taona 80. Toerana mitaiza sy manabe tanora ny fisian’ny kianja toy izao. Fanirian’ny rehetra any an-toerana ankehitriny fa tsy ny tanora ihany, ny hanarenana ny kianjan’ny baolina kitra, izay efa tena antitra. Baolina kitra ankafizin’ny maro sy manana ny lazany any amin’iny faritra iny. Izao aloha, efa zava-dehibe misy ivoaran’ny tanora amin’ny taranja isan-karazany, ny fahavitan’io kianja vaovao io.